الحَسَن/ xadiiska xasanka | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
الحَسَن/ xadiiska xasanka
Siddaan ognahayba Xadiisku si uu ku noqdo mid ka suggan Nabiga Scw waa in laga helaa 5 shardi. 5taas shardi waxaan ku Sharaxay markaan ka hadlayay Xadiiska Saxiixa. Hadaba Xadiis aan laga helin 5tii shardi ee Saxiixu uu lahaa ayaan Halkan ku qeexi doona waxuu yahay InshaAllah.
Waa maxay Xadiiska Xassanka?
Luuqad ahaan: Waaa siffo oo waxaa laga keenay “al xusna” Yacni qurux iyo wanaag.
Isdhilaax ahaan: Waa Xadiiska laga Helo 5ta shardi ee Saxiixa hal xabbo mooyee. Yacni waxaan kawadaa Xadiiska xassanka waa:
Inuu xidhiidhsanyahay sannadkiisu
laga helo cadaalad dadka werinayo
Hadaba Marka la eego waxa ay isaga iyo Saxiixu kukala duwanyihiin waxaa weeye, Meesha uu Xadiiska Saxiixu ay Xifdigoodu ka sareeyay ayuu kan Xassanku ka yahay mid xifdi hooseeya. Waxaan kawadaa Xadiiska xasanka Ruwaada werinaysa ayuusan xifdigoodu ahayn mid sareeya. Laakiin shuruudaha kale ee Saxiixa lagu yaqaan waa laga heli.
Xadiiska Xasanka waa sida kan Saxiixa oo kale marka laga hadlayo ku dhaqanka. In badan oo Culimada fiqhiga, muxadithiinta iyo usuuliyiintuba way ku dhaqmeen.
Tusaale Xadiis xassan ah:
Imaam Tirmidi Xadiis uu soo saaray. Waxuu Yidhi ‘ Waxaa noo warramay Quteybah, Waaxana usii waramay Jacfar Ibnu Suleymaan A Dhabci, can Abii Cimraan Al Juuni, can Abiibakar ibnu Abii Muusaa Al Ashcari ‘ Waxuu yidhi , Waxaan maqlay , abii Baxdharata al Cadawi oo dhahaya : Nabigu scw waxuu yidhi ” Jannada albaabyadeeda waxay ku jirtaan Seefaha hadhkooda”. Xadiiska Noocan ah Imaam Tirmidi waxu yidhi waa xassan qhariib ah. Hadaba sidee ayuu ku noqday xassan?
Nimanka xadiiska werinaya ee kala ah : Quteybah, Abii Cimraan Al Juuni, Abiibakar ibnu abii Musaa Al Ashcari iyo Abii Baxdharata al Cadawi Waa Thiqqah lagu wada kalsoonyahay xifdigooda, aan ka ahayn Jacfar ibnu Suleymaan A-Dhabci , oo siduu shegayo Ibnu Xajar lagu sheego inuu yahay mid aan xifdi sarayn.
Siduu Xadiiska Saxiixa ahba ukala leeyahay Asaanid ama Silsilado dhahabi ah oo ladhaho waa kuwa ugu khatarsan ayuu xadiiska xasankana ukala leeyahay . Imaam Dhahabi waxuu ka dhigay Labo martabado.
Martabada ugu sareysa waa xadiiska uu werinayo: Bahaz ibnu Xakiim uu ka werinayo aabahii ee uu kasii werinayo awowgii. Sido kale Xadiiska uu werinayo Cumar ibnu Shuceyb ee uu ka werinayo aabahii ee uu kasii werinayo awoowgii. Iyo xadiiska uu werinayo Abii Isxaaq ee uu kasii werinayo Abii Taymi.
Martabada la isku haysto talow ma xassanbaa mise waa dhaciif waa Axaadista ay weriyaan: Al Xaarith ibnu Cabdillah, Caasim ibnu Dhamrata iyo Xajaaj ibnu Ardha’a iwm.
Kutubta laga alifay Xasanka:
Ma jiraan Kutub u gooni ah Xassanka , siday gooni ugu ahaayeen axadiista saxiixa. Laakiin waxaa jira kutub aad looga dhex heli karo axaadiis noocan ah (xassan ah). Waxaana kamid ah
Kitaabka Imaam Tirmidi ee La dhaho “Sunanu Tirmidi/ Jaamicu Tirmidi“. Imaam Tirmidi weeye kan aadka usoo caan bixiyay noocan ee ku caan baxay inuu isticmaalo Xadiis xassan ah. In kastoo uu mararka qaar xadiis aan xasan ahayn uu ku sheego xasan.
Sidoo kale kitaabka Imaam Abii Duud ee ah ” Sunanu Abii Daaud”. Xadiiska hadduu saxiix yahay wuu sheegaa , haduu dhaciif daran yahayna wuu sheegaa , kuwii uu ka aamuse ee uusan waxba ku sheegina waa xasan. Hadaba hadaan kitaabkiisa ku aragno xadiis uu ka amusay, oo ay culimaduna waxba ku sheegin waa Xadiis xassan ah marka loo eego Imaam Abii Daaud. Wallahu tacalaa aclaa wa axkam
from → Duruus Yaryar Cilmul Xadiith, Xadiiska Xassanka
← Waa Maxay Xadiis Al Qudsi?
Imaam Jalaaludiin As-Suyuudi →